Cosa significa consacrarsi a Maria: devozione da scoprire in questo mese di Maggio | CHIESA NEWS
Ihe ọ pụtara ịrara onwe ya nye Meri bụ: ịchọpụta ofufe a ga-achọpụta na ọnwa Mee a
Paolo Tescione	Edere ya Maggio 7, 2020 Maggio 7, 2020
Consacrarsi alla Madonna” vuol dire accoglierla come vera madre, sull’esempio di Giovanni, perché lei per prima prende sul serio la sua maternità su di noi.
Odudoro nsọ ahụ nye Meri nwere ezigbo akụkọ mgbe ochie, ọbụlagodi na ọ na-etolite ma na-emewanye n'oge a.
Mana ọ bụ ọkachasị mgbe Apparition nke Fatima mere ka edobere ọtụtụ ndị ọzọ anya: anyị na-echeta ido ụwa, nke Pius XII kwupụtara na 1942, nke ndị Rọshịa na-esote na 1952, site n'aka otu Pontiff.
Ọtụtụ ndị ọzọ sooro, ọkachasị n'oge nke Peregrinatio Mariae, nke fọrọ nke nta ka ọ gwụchaa mgbe inyefe Madonna nsọ.
Isi echiche nke ido-nsọ
Mkpesa bụ usoro dị mgbagwoju anya, nke dị iche iche na ọnọdụ dị iche iche: ọ bụ ihe ọzọ mgbe onye kwere ekwe na-edo Onwe ya nsọ, na-ewere ọrụ ndị a kapịrị ọnụ, ọzọ bụ mgbe ọ na-edo ndị mmadụ nsọ, mba dum ma ọ bụ ọbụna mmadụ.
Otu aka nke Montfort kwuputara ihe abuo na akwali anyi ime ya:
1) Agwara ayi ihe mbu site na ihe nlere nke Nna, Onye nyere anyi Jisos site na Meri, nyefee ya n'aka ya. Ọ na-eso na nraranye na-ahụta na ịbụ nne nke nwanyị na-amaghị nwoke, na-agbaso ihe atụ nke nhọrọ Nna, bụ ihe mbụ mere iji doo ya nsọ.
N’aka nke ọzọ, ịnabata Meri dị ka nne pụtara ịnabata ndị ụka dịka nne [n'ihi na Meri bụ nne nke ụka]; ọ pụtakwara ịnabata ụmụnne anyị na nke mmadụ [n'ihi na ha niile bụ ụmụ nke nne na-ahụkarị ụmụ mmadụ].
Isi echiche nke ido onwe anyi nye Meri dabere na eziokwu ya na Madonna anyi choro iwulite ezi nne na nne na nne: nihi na nne bu akuku nke ndu anyi, anyi achoghikwa ya ma anyi achoghi ya. chọrọ n'ihi na enwere ihe ị ga - ajụ…
Yabụ, mgbe ahụ, ịdo ihe nsọ bụ omume nke ya nke abụghị njedebe n'onwe ya, mana nkwa nke a gharịrị ibi kwa ụbọchị, anyị na - amụta - n'okpuru ndụmọdụ nke Montfort - iwere nzọụkwụ mbụ nke ọ gụnyere: mee ihe niile ya na Maria. Ndụ ime mmụọ anyị ga-erite uru na ya.
Nke gara aga Post Gara aga post:Popu ga-agba ndị mmadụ ume ka ha chọpụtachaa na e nwere ekpere
Next Post → Post ozo:Mgbe afọ ole na ole ọ bịara na coma "Jizọs n'akụkụ akwa m mere ka m bilie"